Ungayilinganisela kanjani intengo yamatshe ayigugu? Isibuyekezo esisha 2021. Amathiphu amahle
Ungayilinganisela kanjani intengo yamatshe?
Intengo yamatshe ayigugu
Thola igugu lakho
Thola ikhwalithi lakho lokuyigugu
Thola imakethe yakho yamatje
Ngaphandle kwedayimane, awukho umthombo ovumelekile wentengo yamatshe emhlabeni. Amanye amazwe azama ukubeka imithetho. Kepha le mithetho isebenza kuphela kulawa mazwe. Emazweni amaningi omhlaba, awukho umthetho.
Intengo yamatshe imane nje ingumphumela wesivumelwano phakathi komthengisi nomthengi. Vele kunemithetho eyisisekelo yokulinganisa inani lamatshe ayigugu, achazwe ngezansi.
Okokuqala, kufanele uqaphele itshe lakho, okungukuthi, uyini umndeni walitshe? Yiziphi izinhlobonhlobo zamatshe? Kungokwemvelo noma kwenzelwa?
Khona-ke, Uma kuvela ukuthi itshe lendalo, umbuzo olandelayo uwukuthi: Ingabe uphathwa noma cha?
Uma itshe lakho liphathwa, umbuzo olandelayo uwukuthi: Luphi uhlobo lokwelapha olwenziwe etsheni?
Lezi kuqala imingcele kuzobe sekusivumela ukuthi siqale ukulinganisa ikhwalithi yetshe.
Ngokuvamile lolu hlobo lwolwazi oluzoyithola kuzo zonke izitifiketi ezikhishwe ngamabara laboratories. Ngoba lezi zilwazi ongazikwazi ukuzibona wena uma ungesiwo gemologist onolwazi futhi uma ungenawo amathuluzi we-laboratory we-gemology.
Kodwa lokhu akwanele ukulinganisa inani letshe.
Uma itshe lichazwe ngokucacile, kuzomele kuchazwe ezinye izindlela ezine.
Owokuqala umbala wamatshe amatshe, okwesibili ukucaca kwetshe, okwesithathu yikhwalithi yokusika itshe futhi okwesine yisisindo setshe.
Lezi zindlela ezine ziyaziwa kakhulu emakethe yedayimane, kodwa bambalwa abantu abazi ukuthi imithetho efanayo iyasebenza kuwo wonke amagugu.
Uma usuqhelile itshe, kusekhona iphuzu elilodwa lokukhomba: intengo yamatshe emakethe, kuye ngokuthi utholakala kuphi futhi ngokuya ngesimo sakho emakethe yezohwebo.
Ngempela, itshe elilinganayo lizobiza kakhulu ezweni lakubo uma uqhathanisa intengo yalo ezweni elisekugcineni komhlaba.
Futhi ekugcineni, intengo yamatshe nayo izohluka ngokuya ngokuthi uyawathenga yini amatshe ayigugu emakethe ye-wholesale noma ye-reatail. Intengo nayo izohluka ngokuya ngokuthi ngabe itshe selivele lifakwe kwi-jewel, noma cha.
Ngempela, njengalezo zonke izinkampani zomnotho, abaxhumanisi abaningi phakathi komkhiqizi wamatshe kanye nomthengi, kuphakama umehluko wamanani.
Akukho ukulungiswa okusheshayo. Uma ufuna ukulinganisa intengo yetshe, kufanele uzenzele isifundo semakethe ngokuyohlangabeza abahlinzeki bamatshe ayigugu lapho ukhona, ngakho-ke, ngokuqhathanisa amanani abo, uzoba nomqondo onzima intengo yamatshe ayigugu asebenza kule ndawo, ngalesi sikhathi esinembile.
Kungumsebenzi onomphela ngoba amanani angashintsha ngokushesha.
Uma unentshisekelo kulesi sihloko, ufuna ukusuka kumcabango wokuzijwayeza, sinikela izifundo ze-gemology.